UMenzi Omdala - I-Airbnb
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-We Manage Assets
Indawo yokuhlala kanokusho enengadi enkulu, indawo yokupaka nokufinyelela ezinkantolo zethenisi. Izixhumanisi zokuhamba eziqondile (isitimela/ibhasi) eziya enkabeni yedolobha laseGlasgow, iWest End kanye neSECC Hydro zihamba imizuzu emi-3. Indawo ekahle yokufinyelela okuqondile kuma-National Parks, eLoch Lomond nangale kwayo. Imindeni, amaqembu ezivakashi kanye nabasebenzi bazojabulela izinga eliphezulu lobumfihlo kanye nokuvumelana nezimo kule villa okunikezwayo. Sicela wazi ukuthi lokhu akufanelekile kumaphathi/imicimbi njengoba le kuyindawo yokuhlala ethulile.
Jabulela imikhosi yasebusika noma yasehlobo njengoba i-Glasgow iyindawo enhle yokuthenga, yaseshashalazini, amasinema, i-carnival, indawo yokudlela, i-Glasgow Comedy festival, i-Edinburgh Festival (50 min), imibukiso, iminyuziyamu nokunye okuningi.
Indawo iqeda ukulungisa kabusha enamagumbi okugeza angu-2 engeziwe.
Lokhu kuzoba indawo enhle yokuhlala yemindeni emikhulu, ibhalansi ephelele yokuthula kanye nokufinyelela okulula enkabeni yedolobha iGlasgow, iLoch Lomond kanye neWest Central Scotland.
ubusuku obungu-7 e- Glasgow City
Indlu itholakala eCrescent, kude nemigwaqo nomsindo wethrafikhi. Izitolo zasendaweni, umshini wemali kanye nekhemisi kuwuhambo lwemizuzu emi-5 kanti isitolo esikhulu se-ALDI siwuhambo lwemizuzu engu-7. Kukhona nepaki eliseduze elineMcDonald's, Pizza Hut, KFC, ArgosSainbury's (5min drive). I-Marks & Spenser iyimizuzu engu-8 yokushayela.
Ibungazwe ngu-We Manage Assets
Lena i-villa yakho kakhulu futhi umsingathi uyatholakala nganoma imiphi imibuzo nosizo.